पाकिस्तानको पूर्वाधार परियोजनाका लागि ६ अर्ब डलर ऋण दिन चीन अनिच्छुक ! - नेपाल एक्सन Online News Nepal
Homeअन्तराष्ट्रियपाकिस्तानको पूर्वाधार परियोजनाका लागि ६ अर्ब डलर ऋण दिन चीन अनिच्छुक !
पाकिस्तानको पूर्वाधार परियोजनाका लागि ६ अर्ब डलर ऋण दिन चीन अनिच्छुक !
काठमाडौं । बढ्दो ऋणको चिन्ताका कारण चीनले पहिलो पटक पाकिस्तानमा पूर्वाधार परियोजनाका लागि ६ अर्ब डलर ऋण स्वीकृत गर्न आनाकानी गरेको छ । रेलवे क्षेत्रको परियोजना चीन-पाकिस्तान आर्थिक करिडोर (सिपिईसी) अन्तर्गत छ, बेइजिङको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभको मुकुट रत्न हो।
ऋण मेनलाइन-I (ML-I) रेलवेको लागि हो, जसमा पेशावरदेखि कराँचीसम्मको 1,872 किलोमिटर रेलवेको दोहोरो र स्तरोन्नति समावेश छ। तीन चरणको एमएल-१ परियोजनाको निर्माणलाई गत वर्ष अगस्टमा पाकिस्तानको राष्ट्रिय आर्थिक परिषद्को कार्यकारी समितिले अनुमोदन गरेको थियो। परियोजनाको वास्तविक लागत $9 बिलियन थियो, जसमा पाकिस्तानी सरकारको इक्विटी कम्पोनेन्ट पनि थियो। पछि क्रमशः कम हुँदै जान्छ ।
चिनियाँ अधिकारीहरू पाकिस्तानको ऋण तिर्न सक्ने क्षमताबाट सतर्क छन्। पाकिस्तानी मिडिया रिपोर्टहरू अनुसार, आधिकारिक रेकर्डहरूमा पनि चिन्ताहरू प्रतिबिम्बित भएको छ। “चिनियाँ पक्षले आईएमएफ कार्यक्रममा पाकिस्तानको ऋण थप बढाउने सम्भावनाबारे स्पष्टीकरण मागेको छ,” उनले भने। पाकिस्तानी पक्षले ऋणको अवस्था अनुगमन भइरहेको र प्रभावकारी परियोजनाहरूको लागि ऋण विस्तार कार्यक्रम अन्तर्गत कुनै प्रतिबन्धहरू छैनन् भनेर स्पष्ट गरेको छ, “योजना आयोगका उपाध्यक्ष जेहान्जेब खानले पाकिस्तानको प्रमुख अंग्रेजी दैनिक एक्सप्रेस ट्रिब्यूनलाई भने। ।
चिनियाँ पक्षले G-20 राष्ट्रहरू र IMF द्वारा लगाएको प्रतिबन्धहरूमा पनि आपत्ति व्यक्त गर्‍यो, जसले बेइजिङको विचारमा ML-1 परियोजनालाई कमजोर पार्न सक्छ, एक्सप्रेस ट्रिब्यून अनुसार। पाकिस्तानको सार्वजनिक ऋण अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा यसको कुल गार्हस्थ उत्पादनको 87.2% मा पुगेको छ र देशले ऋण सेवामा कर राजस्वको 60% भन्दा बढी खपत गरिरहेको छ। तीन वर्षअघि अघिल्लो पीएमएल-एन सरकारको कार्यकाल सकिएको बेला यो जीडीपीको ७२.५ प्रतिशत थियो।”
Previous articleअन्तरिक्षमा कसरी बित्छ यात्रीको दैनिकी ?
Next articleनेपाली नागरिकहरुको विकासका निम्ति दरगाह आला हजरतले बढ़ाए हाथ :- किफायतुल्ला